Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mmelite ọhụrụ na ọgwụ mgbochi COVID-19 na nkwalite
Council of Chief Medical Officers of Health (CCMOH) nke Canada kọrọ na ọganihu na-aga n'ihu n'ofe Canada na mgbasa ozi ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na-amalite ugbu a na ikike niile maka ụmụaka dị afọ 5 ruo 11.
Anyị maara na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, yana mgbakwunye ahụike ọha na usoro ndị ọzọ, na-arụ ọrụ iji belata mgbasa nke COVID-19 na ụdị ya. Agbanyeghị, mpụta nke ụdị Omicron n'oge na-adịbeghị anya bụ ihe ncheta na ọrịa COVID-19 akwụsịbeghị yana na anyị bi na obodo zuru ụwa ọnụ. Dị ka ndị isi ndị ọrụ ahụike ahụike, anyị ghọtara mkpa nha nha zuru ụwa ọnụ na nkesa ọgwụ mgbochi yana ọrụ na-ezighi ezi na-ekere na mpụta ụdị ọhụrụ. Ka anyị na-amụtakwu banyere ụdịdị a, anyị nwere ike inye aka chekwa ọganihu anyị site n'ịga n'ihu na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 yana soro usoro ahụike ọha na eze bụ isi nke rụpụtagoro n'inyere aka ijikwa ọrịa a.
Dị ka ndị isi ndị ọrụ ahụike ahụike, anyị ghọtara mkpa nha nha zuru ụwa ọnụ na nkesa ọgwụ mgbochi yana ọrụ na-ezighi ezi na-ekere na mpụta ụdị ọhụrụ. Ka anyị na-amụtakwu banyere ụdịdị a, anyị nwere ike inye aka chekwa ọganihu anyị site n'ịga n'ihu na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 yana soro usoro ahụike ọha na eze bụ isi nke rụpụtagoro n'inyere aka ijikwa ọrịa a.
Ihe akaebe sayensị, data na-agbanwe agbanwe na ndụmọdụ ndị ọkachamara na-aga n'ihu na-agwa anyị maka iji ọgwụ COVID-19 kacha dị irè akwadoro na Canada. NACI wepụtara ndụmọdụ emelitere n'oge na-adịbeghị anya na nkwalite ọgwụ mgbochi COVID-19 dabere na mmụba ọrịa na-efe efe na ihe akaebe na-ebelata nchebe ka oge na-aga. Usoro izizi zuru oke nke nwere ọgwụ mgbochi mRNA COVID-19 na-aga n'ihu na-abụ ndụmọdụ izizi, ma ekwesịrị inye onye ọ bụla nọ n'afọ ikike ikike na-enweghị mgbochi na ọgwụ mgbochi. NACI ugbu a na-atụkwa aro gbasara ọgwụ nkwalite maka ndị dị afọ 18 na karịa ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala ọnwa 6 agafeela na usoro mbụ ha.
Kpọmkwem, NACI na-atụ aro ka a ga-enye ndị bi na ndị a ọgwụ nkwalite ọgwụ mRNA COVID-19: ndị okenye gbara afọ 50 ma ọ bụ karịa; ndị okenye bi n'ụlọ nlekọta ogologo oge maka ndị agadi ma ọ bụ ebe obibi ndị ọzọ na-agbakọta na-enye nlekọta maka ndị agadi; ndị okenye nọ ma ọ bụ sitere na Mba Mbụ, obodo Inuit ma ọ bụ Métis; ndị na-enweta usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa viral vector mezuru site na naanị ọgwụ mgbochi viral vector; na ndị ọrụ nlekọta ahụike n'ihu ndị okenye (na-enwe mmekọrịta chiri anya anụ ahụ na ndị ọrịa) enwere ike ịnye ndị okenye 18 ruo 49 afọ.
Imecha usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ugboro abụọ maka ndị niile tozuru oke ka dị mkpa. Usoro nke mbụ na-enye ezigbo nchebe megide ụlọ ọgwụ na ọnwụ n'ime ogologo oge, karịsịa mgbe a na-enye dose nke abụọ ma ọ dịkarịa ala izu 8 ka usoro ọgwụgwọ mbụ gasịrị. Onye na-ebuli elu na-eweghachi nchebe nke nwere ike ibelata ka oge na-aga, na-enye ohere maka nchebe na-adịgide adịgide iji nyere aka belata ọrịa, nnyefe, na ụfọdụ ndị mmadụ, ọrịa siri ike. NACI enyochala data gbasara ndị mmadụ butere ọrịa mbụ wee gaa n'ihu na-atụ aro ka ha nweta usoro yiri nke ahụ nye ndị na-ebutebubeghị ọrịa ahụ. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ọbụlagodi mgbe ọrịa gasịrị na-enye nchebe kachasị ntụkwasị obi na ogologo oge megide SARS-CoV 2.
Dị ka ekwuru na nkwupụta anyị gara aga na ndị na-akwalite COVID-19, ógbè na ókèala ga-aga n'ihu na-ewulite na ndụmọdụ NACI iji mejuputa mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi dị irè na mpaghara ha. Anyị kpebisiri ike iji ọgwụ mgbochi COVID-19 kacha mma dabere na ihe akaebe kachasị ọhụrụ na ndụmọdụ ndị ọkachamara iji ruo ebumnuche mkpokọta anyị nke ibelata ọrịa siri ike na ọnwụ n'ozuzu ka anyị na-echekwa ikike sistemu ahụike, yana ibelata nnyefe iji chebe ndị nwere nnukwu ihe egwu. N'ime ndụmọdụ iji nye nkwado maka ndị okenye bi na Canada, anyị na-eme usoro ịkpachara anya ma hụ na anyị na-echebe ndị nọ n'ihe ize ndụ yana usoro ahụike anyị.
NACI ewepụtala ntụzịaka emelitere maka iji ọgwụ mgbochi mRNA dabere na data onyunyo kacha ọhụrụ sitere na Canada, US na Europe, gbasara ọrịa myocarditis na pericarditis na-esochi ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Iji belata ihe ize ndụ nke myocarditis ma ọ bụ pericarditis, nke achọpụtara na ọ dịtụ elu maka Moderna karịa Pfizer na ndị nọ n'afọ iri na ụma na ndị na-eto eto, NACI na-atụ aro na ngwaahịa Pfizer-BioNTech 30 mcg na-ahọrọ maka usoro nke mbụ na afọ 12 ruo 29. afọ. A na-atụ aro oge izu 8 n'etiti usoro nke mbụ na nke abụọ, ebe ọ bụ na ogologo oge dị ka nke a nwere ike inwe obere ihe ize ndụ nke myocarditis karịa oge dị mkpirikpi ma nwee ike ime ka nchebe dịkwuo mma. NACI egosila na ngwaahịa Pfizer-BioNTech 30 mcg nwere ike ịka mma maka ọgwụ nkwalite n'ime ndị dị afọ 18 ruo 29. Ndị nọ n'afọ iri na ụma na ndị na-eto eto 12 ruo 29 afọ ndị nataralarị otu ma ọ bụ abụọ doses nke ọgwụ Moderna ihe karịrị izu ole na ole gara aga adịghị mkpa ichegbu onwe ha, n'ihi na ihe ize ndụ nke myocarditis / pericarditis na ogwu a dị ụkọ na ihe ọjọọ. mmemme na-emekarị n'ime otu izu na-esote ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Agaghị ahapụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụrụ na ngwaahịa ọkacha mmasị adịghị n'oge ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Okwu myocarditis na/ma ọ bụ pericarditis ka agbachara mRNA COVID-19 ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ihe dịka 1 n'ime 50,000 ma ọ bụ 0.002% nke usoro onunu ogwu a na-enye. Nchọpụta ihe omume dị ụkọ dị ka nke a bụ ngosipụta na sistemu onyunyo anyị na Canada na n'ụwa niile dị irè. Ihe omume ọjọọ (mmetụta dị n'akụkụ) na-eso ọgwụ mgbochi COVID-19 na-eme, ma ihe ka n'ọnụ ọgụgụ dị nro ma na-agụnye ọnya na saịtị ịgba ọgwụ ma ọ bụ obere ahụ ọkụ. A na-enye ihe karịrị nde ọgwụ COVID-60 nke ọgwụ mgbochi COVID-19 ruo taa na Canada, yana nsonaazụ siri ike ka dị ụkọ (0.011% nke usoro onunu niile ka enyere). Nnyocha nyocha, gụnyere ndị si Canada, na-aga n'ihu na-egosi na ọgwụ mgbochi mRNA abụọ akwadoro na-ebute irè ọgwụ mgbochi dị elu, karịsịa megide ọrịa siri ike. Ụfọdụ ọmụmụ, gụnyere ndị nọ na Canada, na-atụ aro na ọgwụ mgbochi Moderna butere nzaghachi mgbochi dị elu nke na-ebute arụmọrụ dị elu nke nwere ike ịdịte aka ma e jiri ya tụnyere ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19.
Ndị isi nlekọta ahụike nke Canada nabatara nyocha NACI ma kelee ha maka ịnye ndụmọdụ ha emelitere. Na nkwupụta anyị gara aga banyere ihe ize ndụ nke myocarditis na pericarditis na-esochi ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19, ndị isi ahụike ahụike tụgharịrị uche na mkpa ọ dị ime nchekwa dị mkpa na iji nlezianya chepụta ndụmọdụ anyị na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ahụ. gwa ọhaneze Canada ihe nchoputa. Anyị ga-aga n'ihu na-eji ihe akaebe na-enyere aka chepụta atụmatụ nwere ike ibelata ihe egwu ọbụna karịa ka oge na-aga.
Anyị ghọtara na ndị mmadụ n'otu n'otu na Canada nwere ike ịnwe ajụjụ gbasara ndụmọdụ emelitere maka iji COVID-19 boosters na ọgwụ mRNA, dabere na afọ ha, ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi na ọnọdụ pụrụ iche. Ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị ịga n'ihu na-atụle uru doro anya nke ọgwụ mgbochi niile akwadoro maka ojiji na Canada iji gbochie ọrịa siri ike, ụlọ ọgwụ na ọnwụ sitere na COVID-19. Ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị ịchọ ozi n'aka onye na-ahụ maka ahụike ha ma ọ bụ ndị ọrụ ahụike ọha ma ọ bụrụ na ha nwere ajụjụ gbasara ngwaahịa ọgwụ mgbochi kachasị mma maka ha.
Uru nke ọgwụ mgbochi ndị enyere ikike na Canada na-aga n'ihu karịa ihe egwu dị. Ejikọtara ọrịa nje na-ebute COVID-19 na ọtụtụ nsogbu dị iche iche nwere ike ibute ụlọ ọgwụ na/ma ọ bụ ọnwụ. Myocarditis bụ otu n'ime nsogbu ndị ama ama nke ọrịa COVID-19, nwere nnukwu ihe egwu dị elu mgbe ọrịa butere karịa ka emechara ọgwụ mgbochi. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-enyere aka igbochi nsogbu ndị a niile yana, yana usoro ahụike ọha na eze ndị ọzọ dị ka ikpuchi mkpuchi, izere oghere ndị mmadụ juru, ịba ụba ikuku na ịpụpụ anụ ahụ, nwere ike inyere anyị aka ịnụ ụtọ ihe ndị anyị kacha hụ n'anya. Ndị isi nlekọta ahụike nke Canada na-aga n'ihu na-agba mmadụ niile ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi iji chebe onwe ha na ndị gbara ha gburugburu.
Council of Chief Medical Officers of Health gụnyere onye isi nlekọta ahụike sitere na mpaghara mpaghara na mpaghara ọ bụla, onye isi ahụike ọha na Canada, onye ndụmọdụ ahụike ahụike Canada, onye isi ahụike ọha na eze ahụike nke ndị ọrụ amaala Canada, onye isi. Onye na-ahụ maka ahụike sitere na ụlọ ọrụ ahụike nke mba mbụ, yana ndị otu ụlọ ọrụ sitere na ngalaba gọọmentị etiti ndị ọzọ.